Raggii Afgooye lagu laayay ma Askar Soomaaliyeed Bay ahaayeen?(Maqal) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Raggii Afgooye lagu laayay ma Askar Soomaaliyeed Bay ahaayeen?(Maqal)
On Oct 20, 2016 271 1
Iyadoo xarakada mujaahidiinta alshabaab doraad degmada afgooye ee gobalka shabeelaha hoose ku laysay ciidamo ka tirsan dowladda federalaka ah ayaa idheer garadaka soomaaliyeed qaarkood sheegayaan in ciidamadaasi ahayeen mooryaan u adeegta shisheeyaha dalka ku soo duulay ayna mudnaayeen in dhegta dhiigga loo daro.
Nabadoon maxamed axmed guuleed (fartaag) oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Islaamiga ah ee soomaaliyeed ayaa wareysi ay la yeelatay Idaacadda Islaamiga ah ee alfurqaan ku sheegay in Soomaaliya aanay dowladu ka jirin ee meesha ay tuban yihiin niman difaac u ah shisheeyaha dalka qabsaday.
Wuxuu tilmaamay in ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul gobaleedyadu, geystaan dhac, dil, kufsi iyo dhibatooyin kale oo bulshada soomaaliyeed ka dhan ah dhinaca kalena ay shaqaale u yihiin shisheeyaha gumeysiga ah.
Dhageyso Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed.
Subeyr Warsame says 6 years ago
Nabdoon guuleed alla ha ku dhawro geesi run sheega ah.